မှန်ကန်တဲ့ ဘဝလက်တွဲဖော် အမျိုးသမီးကို ရှာတွေ့ပြီဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ - ONE DAILY MEDIA
ဘဝဆိုတာ တိုတိုလေးလို့ လူကြိုက်များတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ကြားဖူးကြပါတယ်။ သင်ပျော်ရွှင်ကျန်းမာပြီး သင်ချစ်ရသူနှင့် သင့်ဆန္ဒအားလုံးကို ပြည့်ဝခံစားနေချိန်မှာ တော့ အဒါဟာတကယ်ပဲ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချစ်ရေးမှာ မပျော်မရွှင်ဖြစ်နေသူတွေအတွက်တော့ ဘဝက တော်တော်ရှည်တယ်လို့ ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ သင့်‌တော်မှန်ကန်တဲ့ လက်တွဲဖော်နဲ့အတူ ဘဝရဲ့အတားအဆီးတွေနဲ့ မုန်တိုင်းတွေကို ဖြတ်ကျော်ပြီး အတူလက်တွဲ အနိုင်ယူလိုက်ပါ။ အထောက်အပံ့မရသော သို့မဟုတ် သဟဇာတမဖြစ်သော လက်တွဲဖက်များရှိနေပါက ဤအတားအဆီးများကို ကျော်ဖြတ်၍မရနိုင်ဟု ထင်ရနိုင်ပါတယ်။ ယခုမှစကာ ချိန်းတွေ့ ဖြစ်နေတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ကို ပေးချင်တဲ့ အချစ်ရေးအကြံဉာဏ်ကတော့ ရည်းစားကို ဉာဏ်ရှိရှိ ရွေးချယ်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ မှန်ကန်တဲ့ လက်တွဲဖော် မိန်းကလေးကို တွေ့တဲ့အခါ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ??? အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အချက်လေးချက်ကို ဖတ်ပြီး သင့်ရဲ့လက်ရှိဆက်ဆံရေးနဲ့ တိုက်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
မှန်ကန်တဲ့ ဘဝလက်တွဲဖော် အမျိုးသမီးကို ရှာတွေ့‌ပြီဖြစ်ကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
(၁) တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန် လေ့လာကြသလား ??
– ဘဝသည် ကြီးမားသောခရီးရှည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းခရီးကို သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူတစ်ဦးနှင့် အတူမျှဝေပါမှ ပို၍စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ်ခရီးဖြစ်မှာပါ ။ အသစ်အသစ်သော အရာများ သို့မဟုတ် တွေးခေါ်ပုံနည်းလမ်းများကို မျက်စိဖွင့် နားစွင့်တတ်ရန် ပါမောက္ခတစ်ဦးဖြစ်ရန် မလိုအပ်ပါဘူး။ ချိစ်ကိတ်လုပ်နည်း သို့မဟုတ် ရေကူးကန်ထဲ ရေကစားနည်းကဲ့သို့ အရာအသစ်များကို သင်ပေးနိုင်သော သာမန်လူတစ်ယောက်နှင့် အတူရှိနေပါ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သင်ယူကြတဲ့ စုံတွဲတွေဟာ ပိုပြီး ကွဲပြားတဲ့ ဘဝတစ်ခုမှာ နေထိုင်ကြလေ့ရှိပါတယ်။
(၂) တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ယုံကြည်မှုရှိလား??? –
မှန်ကန်သော ဘဝလက်တွဲဖော်ကို ရှာတွေ့ခြင်း ရှိ၊ မရှိ ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ယုံကြည်မှုသည် အရေးကြီးဆုံးအရာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ နှစ်ဖက်စလုံးက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လုံးလုံးမယုံကြည်နိုင်ရင် ဆက်ဆံရေးက မစခင်မှာ ပျက်သွားပါလိမ့်မယ်။ Relationship တစ်ခုရဲ့အစက ဘယ်တော့မှ လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သတိရပါ။ လက်တွဲဖော် နှစ်ဦးစလုံးသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရိုးသားမှုရှိရန် လိုအပ်သောကြောင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အပြန်အလှန် လေးစားမှုရှိရပါမယ်။ သင်ဟာ သင့်ချစ်သူ သူ့သူငယ်ချင်းများနဲ့ အပြင်ထွက်တဲ့အခါ စိတ်ပူပြီး သူမဘယ်မှာရှိလဲ ဆိုတာကို လိုက်မေးဖို့ စိတ်ပူနေတယ်ဆိုရင် ယုံကြည်ချက်မရှိကြသေးပါဘူး။
(၃) ရည်မှန်းချက်တွေ တူကြပါသလား ??
– စုံတွဲအသစ်များသည် ၎င်းတို့၏ ရေရှည်ပန်းတိုင်များကို အမြဲဆွေးနွေးသင့်ပါတယ် ။ ‌မှန်ကန်တဲ့ လက်တွဲဖော် ကို တွေ့တဲ့အခါ သင်တို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ အများစုကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်စလုံးသည် သင်၏အနာဂတ်တွင် မည်သို့မည်ပုံဖြစ်မည်ကိုမျှဝေသည့် ရည်မှန်းချက်တစ်ခုဖန်တီးရန် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် အားကိုးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။။ သင်တို့တစ်ဦးစီ၏အမြင်၌ ကွဲပြားမှုအချို့ရှိခြင်းက အဆင်ပြေပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက် က နောက်တစ်ယောက်အတွက် သူတို့ရဲ့ ဆန္ဒတွေကို ညှိုနိုင်းအလျှော့ပေးလိုစိတ်မရှိရင်တော့ ဒါက ပြဿနာတစ်ခုပါပဲ။
(၄) သူမ၏ဖြစ်တည်မှုကို ချစ်နိုင်မှာလား ?? –
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး အကြံဉာဏ်ကောင်းတစ်ခုကတော့ လူတွေကို ဟန်မဆောင်ဖို့ပါပဲ ။ လူများသည် ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိသော်လည်း ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ပြောင်းလဲရန် ဆုံးဖြတ်မှသာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ချစ်သူကို ချစ်မိသော်လည်း သူမကို ပိုမိုကြင်နာရန်၊ ပိုမိုထက်မြက်ရန် သို့မဟုတ် သူမဟာ စကားနည်းသူဖြစ်လို့ မကျေနပ်ခြင်းများ ရှိနေလျှင် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပြသာနာကြီးထွားလာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမတွင်ရှိသော သင့်ကို စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော အလေ့အကျင့်တိုင်းကို ချစ်မြတ်နိုးရမည်ဟု မဆိုလိုပါဘူး။ သို့သော် ၎င်းကို နားလည်လက်ခံပြီး ထာဝစဉ်နေထိုင်နိုင်ခြင်းရှိမရှိကို သင်သုံးသပ်ရပါမယ်။ ထို့နည်း၎င်းပင် သူမဟာလည်းသင့်ရဲ့ထူးခြားချက်တွေနဲ့ အလေ့အထစရိုက် အားလုံးကို အတူတူခံစားနိုင်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
မှန်ကန်တဲ့လက်တွဲ‌ဖော်ကို ချစ်တဲ့အခါ ခံစားရမယ့်အရာတွေရှိပါတယ်။ သင့်ဘဝ၏အခြားအရာအားလုံး ပိုမိုလွယ်ကူလာမည်ဖြစ်ပြီး အချိန်ကုန်သမျှ မိနစ်တိုင်းကို သင်ပျော်ရွှင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်မှာ ပြဿနာတွေ ကြုံလာရင် တောင် သူက သင့်ကို အားပေးနှစ်သိမ့်ပါလိမ့်မယ်။ ဘဝမှာ ကြီးကြီးမားမား အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း သူက သင့်ကို ပံ့ပိုးပေးမယ့်သူအဖြစ် ရှိနေမှာပါ။ မှန်ကန်သော ဘဝလက်တွဲဖော်သည် ဘဝခရီးလမ်းတစ်ခုလုံးကို များစွာအထောက်အပံ့ပေးပြီး ပိုမိုပျော်ရွှင်စေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် အထက်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ သင့်ချစ်သူကို ပညာရှိရှိရွေးချယ်ပါ။ ဒါဟာ သင်လုပ်ရမယ့်အရေးကြီးဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။